5 Calaamado dib loo naqshadeeyay oo luntay Sumadooda | Abuurista khadka tooska ah
5 calaamadda dib u naqshadaynta oo lumisay summaddooda
Ciise Arjona Montalvo | | General, logos
Aasaaska nooc kasta waa iyada logo. Sida oo kale naqshad cusub oo kasta oo astaan ​​ah wareerin kartaa macmiilkaagaiyo. Waqtiyada ugu badan marka astaanta la badalo inta badan waa la diidaa baraha bulshada.
Muxuu naqshadeynta astaantu aad noo dhibaysaa?. Dhammaantood waxay ku yimaadaan aqoonsi. Dadka xiriirka adag la leh astaanta ayaa u muuqda inay falceliyaan taban in dib loo naqshadeeyo, ugu dambeyntiina saameyn ku yeelato aragtidooda ku aaddan astaanta guud ahaan.
Shaqada ugu weyn ee astaantu waa in la garto, oo la muujiyo fudeydkeedu waa dhexdhexaadkeeda ... Waxtarkiisu wuxuu ku xiran yahay dabeecadda, muuqaalka, la-qabsiga, xusuusta, adduun-weynaha iyo waqtiga-la'aanta. Paul Rand.
Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa isbeddelka ugu dambeeyay ee astaanta adoo Google in aan ku dhejino sawirka kore. Astaanta cusub ayaa muuqaal ahaan la jaanqaadaysa falsafadda Google. Laakiin astaantani waxay lumineysaa cinwaankii xusuusiyay wargeysyada iyo makiinadaha wax lagu qoro iyo taa badalkeeda waxay u egtahay astaan ​​loogu talagalay carruurta.
Shaki kuma jiro in magacyadu waxay u baahan yihiin inay dib isu soo nooleeyaan naftooda iyaga oo beddelaya dookhyada macaamiisha, nasiib darrose, ma jirto hab lagu saadaaliyo sida isticmaaleyaashu uga falcelinayaan isbeddelkan Shirkaduhu waxay adeegsadeen xeeladaha xiriirka dadweynaha, laakiin weligood uma muuqdaan inay saxsan yihiin, sida ku dhacday astaanta Spotify ee midabka cagaaran, ama sida Yahoo! in aan kuu dhigeyno sawirka ugu horeeya ee maqaalkan. Laakiin shirkadahaani saameyn kuma yeelan doonaan, maxaa yeelay qof walba wuxuu adeegsadaa Google, Spotify ama Yahoo!
Taas bedelkeeda, shirkadaha kale nasiib sidaas uma lihin. Marka xigta waa inaan ku dhignaa 5 shirkadood in ay bedeleen ay logo iyo heshay dib u eegis weyn.
1 Waad beddeli kartaa astaantaada, laakiin kama dhigi kartid inay adeegsato mashiinka raadintaada.
2 Haddii uusan jabin, ha hagaajin.
3 Khaladaad badan.
4 Markii Foursquare uu ku wareeray.
5 Hadday ku raadinayaan maxaad u dhuumaneysaa?
Waad beddeli kartaa astaantaada, laakiin kama dhigi kartid inay adeegsato mashiinka raadintaada.
Goorma Microsoft cdhowr jeer badeecadaheeda mar labaad ayuu beddelay 2013, Bing waa la beddelay. Wuxuu ka tagay waxa astaantiisu ahayd buluugga ah, iyo beddelidda warqadda oo xoogga saareysa 'b'.
Qaar badan ayaa ka cawday in calaamadda u muuqatay ka hor 'Bing' waxay aad ugu egtahay Google Drive. Iyo halka Microsoft ay sii wadayso inay si ba'an u riixdo Bing oo ah barxad, sahan 2014 kaliya boqolkiiba 6 kuwa la wareystay waxay tixgeliyaan mashiinkooda raadinta Bing primary.
Haddii uusan jabin, ha hagaajin.
Ka dib markii la beddelay astaantii asalka ahayd ee uu adeegsaday Spotify, ku dhowaad intii ay sameeyeen oo dhan waxay beddeleen midabkii ay lahayd laga bilaabo 2013 illaa a cagaaran Ka sii yaab badan (Shaqsiyan anigu ma jecli gabi ahaanba). Ilaa iyo inta ay indhaheennu la qabsadeen hooska cagaarkaan, adeegsadayaashu way ka cabanayaan taas hooska waxa ay dhigeen waa cabsi lehgaar ahaan loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo xirfadleyda kale ee ku shaqeeya midabada.
Goorma Netflix cusbooneysiisay astaanteeda 2014, waxay ahayd laga xayuubiyay dabeecaddii oo dhan taasi waxay lahayd tii hore. Waxay tagtay cabirka masraxa ee ay bixisay, waxayna lumisay asalkaas aad u qabow xoogaa dhiiga.
Tani ma ahan fiasco-tii ugu horreysay ee Netflix soo wajahda. Sanadkii 2011 Netflix wuxuu galay ganacsiga DVD-ga ee Qwikster. Magac wareersan ka sokow, ereygaas oo lala kaashanayo shirkado duugoobay sida Napster iyo Friendster ayaa la cambaareeyay sheyga. Shirkadda ayaa hakisay qorshayaashii 'Qwikster', laakiin maahan kahor Netflix lumay wax intaa dhaafsiisan iyo wax kayar toona 800.000 macmiil.
Markii Foursquare uu ku wareeray.
Markii la sii daayay afargeesood, waxay noqotay mid kamid ah codsiyada ugu caansan, laakiin waxyar kadib waxbaa isbadalay markay shirkadu qabowday. Si dib loogu hawlgeliyo buunbuunintii aad qabay, Foursquare ayaa bedeshay barnaamijkeeda iyo astaanteeda, haye adeegiisuu u qaybiyey laba, afargeesood y Ciriiri.
Isbedelka ayaa sababay qaar jahwareer y raaxo la’aan dad badan oo isticmaalay arjiga. Isticmaalayaashu way ka niyad jabeen in shirkaddu aysan sameynin isla nidaamka midabka waxayna u maleynayeen in qaybta lafteeda ay ahayd aan loo baahnayn ugu dambayntiina ballan qaadaya in gebi ahaanba la joojiyo adeegsiga.
Hadday ku raadinayaan maxaad u dhuumaneysaa?
Iyada oo leh astaantaada casaan asal ah oo firfircoon, astaanta Shack Radio erey si fudud loo garan karo, dadku horeyba way u ogaayeen cidda ay iswaafaqinayaan oo kaliya jaleecitaan. Si kastaba ha noqotee, si loola tartamo dukaamada sida Apple, shirkaddu waxay soo saartay astaan ​​ay ku sifeeyeen macaamiisha sida "aan loo baahnayn", oo ay weheliso nidaam midab xun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 5 calaamadda dib u naqshadaynta oo lumisay summaddooda
Waxaan falanqeyneynaa 365psd, oo ah goob laga helo ilaha internetka ee bilaashka ah
Dibigii duugga ahaa ee Tomas Vitanovsky